Shiinaha Daabacaadda daabacaadda warshad dhejiska dhejiska iyo soosaarayaasha | Kingtai
Biinankaas waxaa badanaa loo isticmaalaa macaamiisha munaasabadaha dhiirrigelinta waaweyn, astaamaha shirkadda, iyo munaasabadaha xuska.Waxaad heli doontaa biinankaaga dhabta ah ee caadiga ah illaa toddobaad.
Markii aan helno nashqaddaada, waxaan weyddiisan doonnaa naqshadeeyahaaga inuu kuu sawiro.Markaad xaqiijiso dhammaan macluumaadka aan soo saari doonno sida ku xusan sawirka. Tusaalooyinka: ahama, macdanta Waqtiga wax soo saarka: 5-7 maalmood oo shaqo kadib ansixinta farshaxanka. Wax soo saar dhakhso leh ayaa la heli karaa.
Biinanka jilbada biraha ah ee Custom Customly Fudud Made in USA. Maraakiibta 5 maalmood oo shaqo.
Tallaabada ugu horreysa ee calaamadahayagu sida caadiga ah waa in la xaqiijiyo sawirka ka dibna la diyaariyo wax soo saar.Marka ugu horreeya, waxay qaadan doontaa 3-5 maalmood in la dhiso badeecada cusub ee aan sameysto.Muddo labaad, waxaan u baahanahay inaan soo saarno badeecooyinka. Qeybtaan, awooddeena wax soo saar maalinle ah waxay ku saabsan tahay 10000pcs halkii mishiin.Ta saddexaad, haddii la sameeyo daabacaadda daabacaadda dhijitaalka ah ee dijitaalka ah, waxaan si toos ah u dooran doonnaa midabka aad rabto. Mar afraad, daabac qaabka naqshadeynta badeecada.Haddii aan u baahanahay epoxy, waxaan ku dari karnaa badeecadan markale, taas oo mar labaad noqota nidaam kale.Waxaad dooran kartaa qaabka aad rabto!
Custom Offset Digital Print Lapel Pins Offset digital lapel pin ayaa ku habboon naqshadaha adeegsada sawirrada iyo sawirrada ama u baahan faahfaahin kale oo wanaagsan oo midab leh. Iyagu waa ikhtiyaar ku habboon farshaxanka gaarka ah ee adeegsada dariiqyada ama hooska hoos u dhaca. Naqshad kasta oo naqshadaysan waxaa laga abuuray fayl dijitaal ah, oo si toos ah loogu daabacay warqad tayo sare leh oo lagu dhejiyay birta aasaasiga ah, badhanka ayaa markaa lagu daboolayaa epoxy cad oo loogu talagalay dhammaystir jilicsan si loo ilaaliyo sankaaga dhabta sanadaha soo socda.
Sidee caadada looga dhigaa biinanka daabaca daabacan ee dhijitaalka ah. Si ka duwan dhaldhalaalka adag, dhaldhalaalka jilicsan, iyo dhinta biinanka ku dheggan, biinanka lapel ee la abuuray iyadoo la adeegsanayo habka dhijitaalka ah ee loo yaqaan 'offset digital' waa mid siman oo siman. Biinanka dhijitaalka ah ee khaaska ah ayaa ah midka loo maro midabbada firfircoon iyo sawirrada adag ama naqshadaha. Ma jiraan wax fursad ah oo midabbo ordaya ama dhiig baxayaan, qoraalka ayaa u muuqda mid qallafsan oo si sahlan loo akhriyi karo iyadoo aan loo eegayn noocyada aad doorato. Biinanka dhijitaalka ah ee 'Offset' waxay leeyihiin dhammaystir dhalaalaya oo waqti dheer soconaya. Looma baahna in laga walwalo boodhka ama wasakhda uruurinta maxaa yeelay ma jiraan aagag goos goos ah. Biinanka jilicsan ayaa iska caabiya qabashada dhididka ama dunta, waxaana lagu abuuri karaa qaab kasta oo aad qiyaasi karto. Cabirradu waxay u dhexeeyaan 3/4-inji illaa 2-inji, iyo tirada dalbashada waxaa laga heli karaa 100 illaa 10,000 +.
Hore: 2D calaamadda pin
Xiga: Musasalka Lapel Glittering
Bixinta Dijital daabacaadaha biinanka